I-china cylindrical roller rolling abakhiqizi nabaphakeli | Xinri
Amabheringi we-Cylindrical roller ayatholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamadizayini, uchungechunge, okuhlukile nosayizi. Umehluko omkhulu wokuklanywa uyinombolo yemigqa yama-roller namacici wangaphakathi / wangaphandle wendandatho kanye nokwakhiwa kwekheji nezinto zokwakha.
Ama-bearings angahlangabezana nezinselelo zezicelo ezibhekene nemithwalo esindayo ye-radial kanye nejubane eliphezulu. Ukuhlalisa i-axial displacement (ngaphandle kwamabheringi anama-flanges kuwo womabili amasongo angaphakathi nangaphandle), anikela ngokuqina okuphezulu, ukungqubuzana okuphansi kanye nempilo ende yokusebenza.
Amabheringi ama-cylindrical roller nawo ayatholakala ngemiklamo evaliwe noma ehlukanisiwe. Emabhethini avaliwe, ama-roller avikelekile ekungcoleni, emanzini nasothulini, ngenkathi enikeza ukugcinwa kwe-lubricant kanye nokukhishwa okungcolisayo. Lokhu kunikeza ukungqubuzana okuphansi nempilo yesevisi ende. Ukwehlukanisa amabheringi kuhloselwe ikakhulukazi amalungiselelo wokuthwala okunzima ukufinyelela kuwo, njengama-crank shafts, lapho enza khona lula ukugcinwa nokufakwa esikhundleni.
Umzimba wendlela yomgwaqo kanye nokugingqika kokuthwala ama-roller cylindrical unomumo wejometri. Ngemuva kokuklanywa okuthuthukisiwe, umthamo wokuthwala uphakeme. Isakhiwo esisha sokwakheka kobuso be-roller nobuso be-roller ekupheleni asigcini nje ngokuthuthukisa umthamo wokuthwala we-axial, kepha futhi sithuthukisa isimo sokugcotshwa kobuso bokugcina be-roller nendawo yokuxhumana nobuso be-roller ekupheleni nobuso be-roller ekupheleni, futhi kuthuthukisa ukusebenza kwe-bearing.
● Ukungqubuzana okuphansi
● I-Accukufuduka kwe-axial ommodate
Ngaphandle kwamabheringi anama-flanges kumasongo wangaphakathi nangaphandle.
● Umklamo ovulekile we-flange
Ngokubambisana ne-roller end design kanye nobuso obuphelile, gqugquzela ukwakheka kwefilimu okuholele ekuqubukeni okuphansi namandla aphezulu okuthwala umthwalo.
Iphrofayili ye-logarithmic roller inciphisa izingcindezi ezinqenqemeni lapho kuthintwa i-roller / raceway nokuzwela kokungalungiswa kahle nokuphambana kwe-shaft.
● Ukwethembeka kokusebenza okuthuthukisiwe
Ukuqedwa kobuso ezindaweni zokuxhumana zama-roller kanye nama-raceways kusekela ukwakheka kwefilimu yokugcoba ye-hydrodynamic.
Izingxenye ezihlukaniswayo ze-XRL cylindrical roller bearings ziyashintsha. Lokhu kusiza ukukhuphuka nokwehliswa, kanye nokuhlolwa kwesondlo.
Isetshenziswa kabanzi kuma-motors amakhulu naphakathi, ama-locomotives, umshini wokuphotha amathuluzi, izinjini zangaphakathi zomlilo, ama-generator, ama-turbines kagesi, amabhokisi wamagiya, izigayo zokugaya, izikrini zokudlidliza, nokuphakamisa nokuhambisa imishini.
Langaphambilini Needle Roller Bearings
wonke amabombo we-roller cylindrical roller
enkulu cylindrical roller eziveza
cylindrical roller eziveza
cylindrical roller isicelo eziveza